ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံရဲ့ solo show ပွဲက ချစ်သုဝေရဲ့ ဖက်ရှင် - Myanmar Textile & Garment Directory
ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံရဲ့ solo show ပွဲက ချစ်သုဝေရဲ့ ဖက်ရှင်
ချစ်သုဝေကတော့ အမြဲ လန်းဆန်းတက်ကြွနေတတ်တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ပါ။ သူမက ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံရဲ့ solo show ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ရှင်အမိုက်စားလေး ဝတ်ဆင်ထားပြီး လှပနုပျိုနေတာကတော့ ကလေးနှစ်ယောက် အမေလို့ ပြောရင်တောင် မယုံနိုင်စရာပါ။
သူမက သူမရဲ့ Facebook Account မှာ " အရမ်းလှပတဲ့ ဝတ်စုံ ၆၀ ကို သေသပ်လှပလွန်းအောင် ပြသသွားနိုင်တဲ့ မင်းသက်ရေ..အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်နော်!!! " ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပြုစကားလေး ပြောပေးပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကဲ.. Textile ပရိတ်သတ်ကြီး ချစ်သုဝေလေးရဲ့ ဖက်ရှင်ကို ကြည့်ရှု့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီရှင်။
Author- Su Yee Htet
Paris Fashion Week ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု တက်ရောက်မယ့် နေခြည်ဦးနဲ့ ဘုန်းငြိမ်းချမ်း
Kim Soo Hyun ရဲ့ Airport ဖက်ရှင်များ
ချစ်စရာမင်းသမီးချောလေး နန်းစုရတီစိုးရဲ့ ဖက်ရှင်များ
ဘာလာလာ ရုပ်ရှင် red carpet ပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအလှပိုင်ရှင် မင်းသမီးချောလေး Jun Ji Hyun